ilay tovovavy frantsay, tsy nisy zaza,"mpahay lalàna ho an'ny olona voampanga ho nanao fanararaotana ara-nofo hilaza mpiambina vaovao avy amin'izao tontolo izao - Video firesahana amin'ny firaisana ara-nofo. Velona ny fampielezam-peo sy ny Fiarahana.
ilay tovovavy frantsay, tsy nisy zaza,"mpahay lalàna ho an'ny olona voampanga ho nanao fanararaotana ara-nofo hilaza mpiambina vaovao avy amin'izao tontolo izao
Raharaha ny fanokafana indray ny fifanakalozan-kevitra ny taona fanekena ao Frantsa sy ao amin'ny fianakaviana sy ho fanohanana ny ahiana dia tokony ho voampanga amin'ny Raharaha fanolanana ny nisokafan'ny adihevitra ny taona fanekena ao Frantsa sy ao amin'ny fianakaviana sy ho fanohanana ny ahiana dia tokony ho voampanga amin'ny fanolanana frantsay Lehilahy iray niseho tao amin'ny fitsarana ny talata amin'ny iray amin'ny manodidina an'i Paris, noho ny firaisana ara-nofo nanararaotra ny tovovavy ao amin'ny raharaha izay indray, lasa foto-kevitra iadian-kevitra nandritra ny frantsay fifanakalozan-kevitra ny faha-fanekenaAo Frantsa, dia tsy misy ara-dalàna ny taona ahafahan ny ankizy iray dia tsy hahatratra ny taona fanekena manaiky miditra ao ny firaisana ara-nofo, na dia nandidy ny fitsarana fa ny ankizy dia ny dimy taona ary tsy hahatratra ny taona izay izy ireo no nanaiky hiditra ao ny firaisana ara-nofo. Ny ahiana ny mpisolovava nilaza fa ny ankizivavy nanaiky ary nahafantatra ny zavatra ataony, raha ny ankizivavy ny mpahay lalàna, dia nilaza fa izy dia tsotra fotsiny ihany koa ny tanora sy sahiran-tsaina ny hanohitra. Ao amin'ny fanapahan-kevitra fa tafintohina ny maro, ny biraon'ny Mpampanoa lalàna ao an-tanàna ny Pentis nanapa-kevitra ny hametraka ny olona amin'ny fitsarana tsy noho ny herisetra, nefa ho an'ny"fanararaotana ara-nofo ny tsy ampy taona izay tsy tonga olon-dehibe."Mpisolovavan'ny milaza fa ny lehilahy sy ny tovovavy nihaona tao amin'ny Zaridaina, ary ny zazavavy an-tsitrapo nanaraka azy ny trano sy nanaiky ny firaisana ara-nofo. Izy koa nilaza fa ny mpanjifa no, fara fahakeliny, mieritreritra. Ny zazavavy ny fianakaviana nametraka fitarainana ny fanolanana fitarainana any Montagne paroasy, fa ny mpampanoa lalàna raha ny fahitàna azy dia nino fa izy ireo dia tsy hampiasa herisetra na faneriterena. Amin'ny teny frantsay ny lalàna, ny fanolanana dia faritana ho toy toy ny firaisana ara-nofo fidirana manolo-tena"ny fampiasana hery, fanerena, ny fandrahonana, na ny tsy nampoizina.Efa taona maro sy ny volana, efa-taona,"mpisolovava marka Godardian hoy ny talata."Hanova ny tantara". Noho izany ianao dia tsy ny zaza."Ny mpiara-miasa Sandrine Paris-Heidegger dia nandeha lavidavitra kokoa ary niteny hoe:' tsy mifandray amin'ny firaisana ara-nofo adala amin'ny mahantra, misy pentina kely gisa coop.'"Nilaza izy fa indray mandeha ny ankizy 'manana firaisana ara-nofo tena maneho hevitra sy toe-tsaina ny mametraka ny tenany ho amin'ny loza', ka 'tsy voatery midika fa ny olona amin'ny lafiny iray hafa dia ny firaisana ara-nofo mpiremby'. Ny zon'ny ankizy ao amin'ny vondrona sy ny mpitsabo aretin-tsaina ny fijoroana ho vavolombelona amin'ny raharaha ity fa raha tsy izany. Karin Diebold, ny fianakaviana ny mpahay lalàna, nanontany ny fitsarana ny talata mba hanova ny fanolanana-poana. Ny ahiana"fantatro tsara fa izy dia zaza,"hoy Paola Le Bigotto Makaô, Filohan'ny COFRADE, elo fikambanana ho an'ny zon'ny ankizy ny vondrona."Ity zaza ity amin'izao fotoana izao dia tsy ny alalan ny fiaraha-monina frantsay."Ao ny zava-nitranga ny faharesen-dahatra ho an'ny herisetra ara-nofo fa ny ray ny zanany roa miatrika am-ponja hatramin'ny dimy taona. Ny fanolanana ny tsy ampy taona izay tsy nahatratra ity taona dia saziana hatramin'ny taona maro an-tranomaizina. Nilaza ny mpitsara fa ny Mpampanoa lalàna nifidy ny tsy marina ny fiampangàna ary nandidy fa ny raharaha ho naniraka ny mpikaroka ho an'ny fanadihadiana lalina. Noho izany, ny fitsarana dia nahemotra."Ary ny fandresena,"Diebold nilaza ny mpanao gazety taorian'ny fitsarana azy."Ny zava-dehibe indrindra dia ny hoe ny tovovavy dia mety ho heno tahaka ny lasibatry ny fanolanana, dia afaka milaza fa ity dia ny fandresena ho an'ireo niharam-boina.Godardian, ny fiarovana ny mpahay lalàna, dia nilaza fa ny fanapahan-kevitry ny fitsarana dia natao ho toy ny vokatry ny kisendrasendra fifantenana. Ny raharaha ny Tendrombohitra dia iray amin'ireo maro izay niteraka ny korontana tao Frantsa - ny fitsipika mikasika ny maha-lahy sy vavy ny zaza-doha izay heverina loatra ny milefitra ho an'ny zon'ny ankizy sy mpiaro ny zon'ny vehivavy. Ny governemanta ny Filoha Emmanuel Macron no nanolotra volavolan-dalàna mba hampidirana misy niorina ara-dalàna taona ny ambany indrindra dia manaiky miditra ao ny firaisana ara-nofo. Izany dia tokony ahitana ny fanomezana fa ny firaisana ara-nofo amin'ny ankizy izay tsy nahatratra ny taona sasany dia, ny famaritana, tsy azo ihodivirana.
Ny tolo-taona ny ambany indrindra dia mbola tsy voafaritra, fa ny fampihenana ny mety ho eo izany ary izay.
Ny volavolan-dalàna, izay ahitana rafitra malalaka ny fepetra mba hiadiana amin'ny"firaisana ara-nofo sy manavakavaka ny vehivavy ny herisetra,"dia tokony ho aseho amin'ny filankevitry ny Minisitra ny Minisitra ny volana manaraka. Ity zava-nitranga dia niteraka tsy finoana sy ny fahavinirana. Tamin'ny novambra, ny fitsaràna ady heloka madiodio ny Frantsay nampangaina ho nanolana ny iray taona zazavavy. Ny mpitsara ao Paris faritra hita fa ny Seine-et-Marne tsy mampiasa herisetra, na faneriterena.
Maimaim-poana Tsy misy Fitia fisoratana Anarana
Ulaanbaatar sa Pagpakig-Date, Online Dating Dakbayan sa Ulaanbaatar.
ny firaisana ara-nofo Niaraka watch video ny firaisana ara-nofo lahatsary mahafinaritra maimaim-poana Mampiaraka ny vehivavy maimaim-poana ny mampiaraka toerana ny lahatsary amin'ny chat ho an'ny olon-dehibe Chatroulette ankizivavy amin'ny chat roulette an-tserasera amin'ny ny ankizivavy manambady vehivavy te-hihaona video Mampiaraka maimaim-poana manambady te hihaona